Ny Semalt dia mamaritra fitaovana lehibe handrafetana lahatsoratra avy amin'ny doka HTML
Ny lahatsoratra amin'ny doka HTML dia karazana votoaty voafaritra eo amin'ny samy hafa HTML tags ( ,,,). Misy programa isan-karazany sy mahery vaika izay afaka manampy amin'ny fijinjana ireo karazan-drakitra rehetra, anisan'izany ny lahatsoratra, sary, ary rohy. Ankoatr'izany, ny angon-drakitra azo ampiasaina dia azo ovaina ho endrika natoraly sy be mpampiasa. Ankoatr'izay, tsy mila mianatra fehezan-dalàna ianao, satria ireo fitaovana ireo dia tsara ho an'ireo izay tsy manana fahaiza-manao kodia na traikefa.
Import.io dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra sy mahasoa indrindra izay azo ampiasaina amin'ny mozika Magic. Ny fitaovana dia tena malaza noho ny fifandraisana amin'ny mpampiasa azy. Ampiasao ny Import.io, azonao atao ny manantona ny URL, ary ny programa dia hikoropaka sy handefa ny vaovao ho anao. Manolotra ny votoatiny amin'ny endriky latabatra izy ary tonga miaraka amin'ireo safidy mialoha ny fiatoana. Ny data dia azo alefa amin'ny endriky ny JSON na ahafahana mamonjy mivantana mivantana ao anaty rakitra sarotra.
Ny Octoparse dia mamoaka ny karazam-pahalalana rehetra, mandrindra azy io amin'ny endrika voajanahary ary manampy anao hanavaka ny angon-drakitra sy ny rafitra. Ny ilainao fotsiny dia ilazao ny fandaharam-potoana izay tokony hatao sy ny fomba hanangonana ny angona na amin'ny halalin'ny halavany. Manala ny angon-drakitra an-tsoratra izay misy tsipika. Ity programa ity dia tsy manohana ny rakitra an-tsoratra, horonan-tsary, feo ary sary.
Miaraka amin'ny Uipath, mora ny manamboatra ny fameno, ny navigation, ary ny manindry bokotra.
Kimono dia miasa amin'ny famoahana vaovao sy ny vidiny, izay fitaovana marina sy mandroso mba hamokarana lahatsoratra avy amin'ny tahirin-tsoratra HTML.
Ny Scraper Screen dia fitaovana mahomby hafa azo ampiasaina, izay afaka manome ny antonta madio sy madio, ary koa ny fiatrehana fahasarotana mifandraika amin'ny fandraketana fandrakofana. Tsy dia misy dikany loatra, ary ny dikan-kalitao maimaim-poana dia misy karazana safidy voafaritra.
Scrapy dia iray amin'ireo rafitra mahery vaika, avo lenta ary mahavariana ao anaty tranokala sy fandrindrana ny data. Izy io dia ampiasaina mba hikirakira tranonkala maro ary afaka manaisotra ny angon-drakitra voatanisa sy tsy voaaro araka izay takinao. Izy io dia manampy amin'ny fanaraha-maso sy manamboatra ny kalitao momba ny angon-drakitra, ary manome antoka fa hahazo ny vokatra tsara indrindra amin'ny orinasanao an-tserasera ianao.
7. Rakitra Wiki:
Tahaka ireo programa hafa mitovy amin'izany, ny Scraper Wiki dia misy safidy maro. Tsy mila fahaiza-manao koditra ianao mba hahazoana vokatra tsara indrindra amin'ity programa ity. Azonao atao ny maka sary pejy tsy mahazatra fa ny Wikipedia manontolo ihany amin'ny fampiasana Scraper Wiki. Manohana ny PHP, Python, ary Ruby izy io.
Antenaina fa nahita zavatra sarobidy ato amin'ity lisitra ity ianao, ary mamporisika anao izahay hizara ireo fitaovana mafana amin'ny namanao Source .